Abaqhubi bezokhenketho eTanzania bakhupha ikhaphethi ebomvu yeearhente zokuhamba zamanye amazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » Abaqhubi bezokhenketho eTanzania bakhupha ikhaphethi ebomvu yeearhente zokuhamba zamanye amazwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Abaqhubi bezokhenketho bahambisa ikhaphethi ebomvu kwiiarhente zokuhamba zamazwe aphesheya ngenxa yokuba beza kungekudala eTanzania njengenxalenye yesicwangciso sayo esihle sokuqalisa ishishini lokhenketho ngezigidi-gidi kubhubhane we-COVID-19.
Ukuhanjiswa ngumtshangatshangiso okhohlakeleyo weCoronavirus, ukhenketho lushishino lokujikeleza imali eTanzania.
Idala imisebenzi eyi-1.3 yezigidi, ivelisa i-2.6 yezigidigidi ngonyaka, elingana ne-18 kunye neepesenti ezingama-30 ze-GDP yelizwe kunye neerisithi zokuthumela ngaphandle, ngokwahlukeneyo.
Umbutho wabaTyelelo baseTanzania (i-TATO) ngoku usebenza ubusuku nemini egameni lamalungu angama-300 nangaphezulu ukuzisa uninzi lweearhente zokuhamba ukuphela kukaSeptemba 2021.
“Siqalisa umatshini wokwamkela uninzi lweearhente zokuhamba zehlabathi, njengenxalenye yesicwangciso esiliqili sokuthengisa indawo esiya kuyo emva kwesifo [se] COVID-19,” utshilo u-CEO wombutho, uMnu Sirili Akko.
Iiarhente, okanye njengoko uninzi lwazo lwanamhlanje zikhetha - abacebisi ngezohambo okanye abayili - ngesiqhelo bathengisa iindawo zokufikela kunye nokwenza lula inkqubo yokucwangcisela ukhenketho kubakhenkethi, ukongeza ukubonelela ngeenkonzo zothethwano kunye neephakeji zohambo.
"Isicwangciso sethu [kukuzisa] iiarhente zokuhamba ezingama-300 zamazwe aphesheya kwezi nyanga ziyi-12 zizayo, ezilingana neearhente ezingama-25 ngenyanga, ukuze siphonononge kwaye sive ukuba iTanzania inikwa njani ubuhle bendalo obungenakuthelekiswa nanto, utshilo u-Akko.
Phantsi kwenkxaso yeNkqubo yeZizwe eziManyeneyo (UNDP) UTATO utyale imali eninzi ngokwexesha, izakhono, kunye nemali yokubeka iTanzania njengendawo ekhuselekileyo nenendawo yokutyela kwindawo yayo enomoya ophezulu wokutsalela abahambi abaphezulu elizweni ngokusebenzisa iindlela zokuthengisa ezijolise kwiimarike eziphambili.
Iziphumo zoPhando lweMarike emanyeneyo zibonisa ukuba intengiso yezokhenketho kwihlabathi iyakufikelela kwi-1.2 yezigidi zeerandi kwisithuba sama-2021-2027 ngomyinge wokukhula komyinge we-11.1 yeepesenti ngonyaka.
Umbono opheleleyo kukugcina ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwishishini lezokhenketho ukuze kukhuthazwe amanye amashishini, kufunyanwe amawaka emisebenzi elahlekileyo, kunye nokwenza ingeniso kuqoqosho.
Isicwangciso sokuzisa iiarhente zokuhamba kwilizwe liphela zisothuse, njengoko abaqhubi bezokhenketho bezama ukwahlula iindlela zokuthengisa ngenjongo yokutsala iindwendwe ezininzi kunye ukwandisa amanani ezokhenketho ukusinda kuhlaselo lokhuphiswano olunqumlayo olusuka kwezinye iindawo kubhubhane wepost-COVID-19.
Abahlalutyi beshishini lezokhenketho bathi, eli nyathelo, licebisa ukutshintsha kwembali kwisicwangciso-qhinga sentengiso, njengoko yayiqhelekile indlela yabahambi bezokhenketho eye yanyanzeliswa ekuhambeleni amazwe aphesheya ukuze kukhuthazwe indawo ezinomtsalane kubakhenkethi kweli lizwe.
Usihlalo weTATO, Mnu.Wilbard Chambulo, uthe umbutho wakhe ubusebenza kumalinge aliqela okuvuselela ishishini lokhenketho ebhedini.
Sifumene umbono wokutshintsha isicwangciso, kuba senza ukuthengisa kunye nengqondo yezoqoqosho ukuzisa iiarhente zohambo ukuze zifumane umbono wezinto zendalo ezinikiweyo kunamalungu ethu ukuba azilandele phesheya kwemifanekiso ehambayo. Iziphumo zobhubhane we-COVID-19, ”utshilo uMnu Chambulo.
I-TATO, kunye ne-Ofisi yoMphathiswa Wezempilo, kutshanje ikhuphe i-COVID-19 yesitofu sokugonya esona sikhulu sabona amawaka abasebenzi abaphambili kwishishini lezokhenketho befumana i-jabs ngaphambi kwexesha labakhenkethi.
Umbutho ukwaphuhlise nenkxaso yeziseko zophuhliso kwezempilo kwimijikelezo ephambili yezokhenketho, ebiquka phakathi kwezinye izinto, ukuba nee-ambulensi emhlabeni, izivumelwano nezinye izibhedlele eziza kusetyenziselwa iinkonzo zabakhenkethi xa kunokwenzeka nayiphi na into engxamisekileyo, kwaye idibanisa iprojekthi neenkonzo ze oogqirha abaphaphazelayo - konke oku kumzamo wokuvuselela ishishini lokhenketho.
Kutshanje, i-TATO ikwazile ukukhupha, ngokusebenzisana norhulumente, amaziko okuqokelela iisampulu e-COVID-19 eKogatende naseSeronera kumbindi nakumantla eSerengeti ngokwahlukeneyo.
Ngethamsanqa, ezi nzame zisisiseko ngandlela thile ziqale ukuhlawula izabelo ngokuyalela ezinye izithuthi kunye nokukhuthaza ukubhukisha okutsha kwamalungu eTATO.
Inqwelomoya yenqwelomoya ehamba phambili eSwitzerland, u-Edelweiss, ubhengeze ukuba izakongeza iKilimanjaro, iZanzibar, neDar es Salaam njengeendawo zayo ezintathu zokuya eTanzania ukusukela ngo-Okthobha, inikezela ngemitha yethemba kumzi-mveliso wokhenketho.
UEdelweiss, inkampani engudade weSwitzerland International Air Lines kunye nelungu leLufthansa Group, uqhayisa ngesiseko sabathengi esiphantse sibe zizigidi ezingama-20 kwihlabathi liphela.
Ukusukela nge-8 ka-Okthobha ka-2021, u-Edelweiss uzokuhamba ngenqwelomoya esuka eZurich esiya kwisikhululo senqwelomoya saseKilimanjaro (i-KIA), isango eliphambili eliya kwisekethe yezokhenketho esemantla eTanzania, kabini ngeveki, kunye nabakhenkethi abaphezulu abaphuma eYurophu ukuya kuthi ga kweli xesha liphezulu lezokhenketho.
UArif Ahmed uthi:
Agasti 26, 2021 kwi-12: 10
Molo mnumzana / madam siyabulela ukuba ungasinceda asinabo thina baxhasi ukusukela kwiminyaka emibini edlulileyo ndinendawo zokuhlala izilwanyana zasendle ezintathu ezintle kakhulu kumazantsi eTanzania 🇹🇿 nceda 🙏🏼